ESI WEGHACHITE PASWỌỌDỤ GỊ NA SKYPE - SKYPE - 2019
Paswọdu nataghachite sitere na akaụntụ Skype
Mgbe mgbe, ihe mgbaru ọsọ kachasị nke ịrụ ọrụ na akwụkwọ Excel bụ iji bipụta ya. Ma, ọ dị mwute ikwu na ọ bụghị onye ọ bụla maara otú e si arụ ọrụ a, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibipụta ọdịnaya niile nke akwụkwọ ahụ, mana naanị ụfọdụ ibe. Ka anyị chọpụta otú e si ebipụta akwụkwọ na Excel.
Lee kwa: Mbipụta akwụkwọ na MS Okwu
Mmepụta akwụkwọ na ngwa nbipute
Tupu ịmalite ibipụta akwụkwọ ọ bụla, ị kwesịrị ijide n'aka na onye nbipute ahụ jikọtara ya na kọmputa gị nke ọma ma mee ntọala ndị dị mkpa na sistemụ arụmọrụ Windows. Na mgbakwunye, aha ngwaọrụ ahụ ị na-ezube ibipụta ga-egosipụta site na interface Excel. Iji hụ na njikọ na ntọala ziri ezi, gaa na taabụ ahụ "Njikwa". Ọzọ, gaa na mpaghara "Bipute". N'etiti etiti nke window meghere na ngọngọ ahụ "Onye nbipute" ị ga-egosipụta aha ngwaọrụ ahụ ị na-eme atụmatụ ibipụta akwụkwọ.
Ma ọ bụrụgodi na egosiri ngwaọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi, ọ kaghị ekwenye na ejikọtara ya. Eziokwu a pụtara naanị na a ga-ahazi ya n'usoro ihe omume. Ya mere, tupu ịmepụta akwụkwọ ahụ, jide n'aka na ọ na-abanye na nbipute ma jikọọ na kọmputa site na USB ma ọ bụ netwọk ikuku.
Usoro 1: Bipụta akwụkwọ niile
Mgbe a kwadoro njikọ ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu na-ebipụta ọdịnaya nke faịlụ Excel. Ụzọ kachasị mfe bụ ibipụta akwụkwọ ahụ niile. Site na nke a ka anyị na-amalite.
Gaa taabụ "Njikwa".
Ọzọ, gaa na mpaghara "Bipute"site na ịpị ihe kwekọrọ na ihe dị n'akụkụ aka ekpe nke window ahụ meghere.
Mpido mpịpị akwụkwọ ahụ amalite. Ọzọ, gaa na nhọrọ nke ngwaọrụ. N'ọhịa "Onye nbipute" aha nke ngwaọrụ ị na-eme atụmatụ ibipụta kwesịrị igosipụta. Ọ bụrụ na aha onye ọzọ na-ebi akwụkwọ gosipụtara n'ebe ahụ, ịkwesịrị ịpị ya ma họrọ nhọrọ nke ga-eme ka ị nweta afọ ojuju.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị gafere na ngọngọ nke ntọala dị n'okpuru. Ebe ọ bụ na anyị kwesịrị ibipụta ọdịnaya niile nke faịlụ ahụ, anyị na-pịa ubi mbụ ma họrọ site na ndepụta nke meghere "Bipụta akwụkwọ dum".
Na mpaghara na-esonụ, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ụdị mbipụta iji mepụta:
Ugboro abụọ na-adabere na ngọngọ dị ogologo;
Bilateral na nkedo dịtụ mkpụmkpụ.
Ọ dị mkpa ka ịhọrọ nhọrọ dịka ihe mgbaru ọsọ dị iche, ma ndabara bụ nhọrọ mbụ.
Na paragraf na-esonụ, anyị ga-ahọrọ ma ị ga-edeghaara anyị akwụkwọ ndị e biri ebi ma ọ bụ. N'okwu mbụ, ọ bụrụ na ị bipụta ọtụtụ mbipụta nke otu akwụkwọ ahụ, a ga-ebipụta akwụkwọ niile ozugbo: nke mbụ, mgbe nke abụọ, na ihe ndị ọzọ. N'okwu nke abụọ, onye nbipute ahụ na-ebipụta otu mpempe akwụkwọ mbụ niile, mgbe nke abụọ, na ihe ndị ọzọ. Nhọrọ a bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ebipụta ọtụtụ mbipụta nke akwụkwọ ahụ, ma kwadoo nhazi nke ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị bipụta otu mbipụta, ọnọdụ a dị ezigbo mkpa nye onye ọrụ ahụ.
Ebe dị ezigbo mkpa bụ "Ntuziaka". Mpaghara a na-ekpebi nhazi nke mbipụta a ga - eme: na ihe osise ma ọ bụ na ntụgharị ihu. N'okwu mbụ, elu nke mpempe akwụkwọ ahụ dị ukwuu karịa obosara ya. Na nhazi ihu ala, obosara nke mpempe akwụkwọ dị elu karịa elu.
Ala ọzọ na-akọwa nha akwụkwọ edemede ahụ. Nhọrọ nke nkwekọrịta a, nke mbụ, na-adabere n'ụdị akwụkwọ ahụ nakwa na ike nke onye nbipute ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, jiri usoro a A4. E debere ya na ntọala ndabara. Ma mgbe ụfọdụ ị ga-eji nha ndị ọzọ dị.
N'ọzọ ọzọ, ị nwere ike ịtọ nha nke ubi. Uru ndabara bụ "Ubi Oge Nile". Na ụdị ntọala a, ogo nke ala na ala bụ 1.91 cm, n'aka nri na aka ekpe - 1.78 cm. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịwụnye ụdị ụdị nhazi ndị a:
Ụdị njedebe ikpeazụ.
Ozokwa, enwere ike ịhazi nha nke aka, dịka anyị ga-atụle n'okpuru.
Ebe ọzọ na-esetịpụ ihe mpempe akwụkwọ ahụ. Enwere nhọrọ dị otú a maka ịhọrọ nhọrọ a:
Ugbu a (mbipụta nke akwụkwọ mpịakọta na oke nha) - site na ndabara;
Dee mpempe akwụkwọ n'otu ibe;
Dee ogidi niile na ibe.;
Dee ederede niile na ibe..
Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka gị dozie ọnụ ọgụgụ ahụ, na-edozi otu uru bara uru, ma na-ejighị ntọala ahụ dị n'elu, ị nwere ike ịgafe "Nhọrọ nhọrọ ndị omenala".
Dị ka ihe ọzọ, ịnwere ike ịpị ihe odide ahụ "Ntọala Ntọala"nke dị na isi ala na njedebe nke ndepụta nke ubi nhazi.
Maka ihe ọ bụla n'ime omume ndị a, a na-agbanwe mgbanwe na windo a na-akpọ "Ntọala Ntọala". Ọ bụrụ na ntọala ahụ dị n'elu nwere ike ịhọrọ n'etiti nhọrọ nrụpụtara, mgbe ahụ, onye ọrụ nwere ohere iji hazie ihe ngosi ahụ dị ka ọ chọrọ.
Na akpa taabụ nke windo a, nke a na-akpọ "Page" Ị nwere ike ịhazigharị ọnụ ọgụgụ ahụ site n'ikwu kpọmkwem uru ya na pasent, nhazi (eserese ma ọ bụ odida obodo), ụdị akwụkwọ, na àgwà ibipụta (ndabara 600 ntụpọ kwa elekere).
Na taabụ "Ubi" ezi nhazi nke ihe ubi. Cheta, anyi kwurula banyere ohere a obere elu. N'ebe a, ị nwere ike ịtọ kpọmkwem, gosipụtara na ụkpụrụ zuru oke, njedebe nke ubi ọ bụla. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ozugbo ịtọ ntọala ma ọ bụ vetikal.
Na taabụ "Ụkwụ" Ị nwere ike ịmepụta isi na footers.
Na taabụ "Mpempe akwụkwọ" Ị nwere ike ịhazi njirimara nke nkwụsị njedebe, ya bụ, ụdị ndị a ga-ebipụta na mpempe akwụkwọ ọ bụla n'otu ebe. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhazizi usoro ntanetịpụta na ngwa nbipute. Okwesiri ike ibipụta mpempe akwụkwọ ahụ, nke na ndabara anaghị ebipụta, edemede na kọlụm, na ihe ndị ọzọ.
N'otu oge na windo "Ntọala Ntọala" mezue ntọala niile, echefula ịpị bọtịnụ "OK" na ala ya iji chekwaa ha maka obibi.
Anyị laghachiri ngalaba "Bipute" taabụ "Njikwa". N'elu aka nri nke windo mepere emepe bụ ebe ị ga-achọpụta. Ọ na-egosiputa akụkụ nke akwụkwọ ahụ na-ebute na ngwa nbipute. Site na ndabara, ọ bụrụ na i mebeghị mgbanwe ọ bụla na ntọala ahụ, a ga-ebipụta faịlụ ahụ dum, nke pụtara na akwụkwọ dum ga-egosipụta na mpaghara nhụchalụ. Iji nyochaa nke a, ịnwere ike ịpịgharịa akwụkwọ mpịakọta.
Mgbe ntọala ndị ahụ ịchọrọ dị mkpa iji dozie, gosi bọtịnụ ahụ "Bipute"dị na tab nke otu aha "Njikwa".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ebipụta ọdịnaya niile nke faịlụ a na ngwa nbipute ahụ.
E nwekwara nhọrọ ọzọ nke ibipụta ntọala. Enwere ike ime ya site na ịga na tab "Ntọala Page". Njikwa ngosi ngosi dị na windboxbox. "Ntọala Ntọala". Dịka ị pụrụ ịhụ, ha dị ka otu na tab "Njikwa" ma na-achịkwa otu ụkpụrụ.
Iji gaa windo "Ntọala Ntọala" Ịkwesịrị ịpị akara ngosi ahụ n'ụdị nke na-abaghị uru ọ bụla na akụkụ aka nri ala nke aka nke aha ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ndị ahụ, nke anyị maara nke ọma, ga-ebido, nke ị nwere ike igosi omume site na iji algorithm n'elu.
Nzọụkwụ 2: bipụta otu ụdị peeji nke akọwapụtara
N'elu elu, anyị lere anya iji mezie mbipụta nke akwụkwọ n'ozuzu ya, ma ugbu a, ka anyị tụlee otú e si eme nke a maka ihe ndị ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị achọghị ibipụta akwụkwọ ahụ dum.
Nke mbụ, anyị kwesịrị ịchọta ibe ndị dị na akaụntụ ahụ ka a ga-ebipụta. Iji rụọ ọrụ a, gaa na ibe peeji nke. Enwere ike ime nke a site na ịpị akara ngosi ahụ. "Page"nke dị na ogwe ọnọdụ na akụkụ aka nri ya.
E nwekwara nhọrọ mgbanwe ọzọ. Iji mee nke a, kwaga na taabụ "Lee". Ọzọ, pịa bọtịnụ "Ụdị Page"nke etinyere na rịịbido na igbe ntọala "Ụdị Echiche Nyocha".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-amalite ụdị ihuenyo nke ikiri akwụkwọ ahụ. Dị ka anyị na-ahụ, n'ime ya, akwụkwọ ndị ahụ dị iche iche na-ekewapụ onwe ha site na ibe ha, ma ọnụ ọgụgụ ha dị anya na-ahụ maka ndabere nke akwụkwọ ahụ. Ugbu a, ị ga-echeta nọmba nke ibe ndị ahụ anyị ga-ebipụta.
Dịka n'oge gara aga, kwaga na tab "Njikwa". Gaa na ngalaba "Bipute".
E nwere ubi abụọ na ntọala. "Peeji". Na mpaghara mbụ anyị na-egosi na ibe mbụ nke ọnụọgụ nke anyị chọrọ ibipụta, na nke abụọ - nke ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ibipụta naanị otu ibe, mgbe ahụ na ubi abụọ ị ga-ezipụta nọmba ya.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na-eme ntọala niile a tụlere mgbe ị na-eji ya eme ihe Usoro 1. Ọzọ, pịa bọtịnụ "Bipute".
Mgbe nke ahụ gasịrị, onye nbipute ahụ na-ebipụta akwụkwọ dị iche iche a kapịrị ọnụ ma ọ bụ otu mkpụrụ akwụkwọ akọwapụtara na ntọala.
Nzọụkwụ 3: Bipụta ibe ọ bụla
Ma ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịkwesịrị ibipụta ọ bụghị otu ihe, mana ọtụtụ peeji nke ibe ma ọ bụ ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche? Ọ bụrụ na Okwu, nchịkọta na ọkwa nwere ike ịkọwapụta kpọmkwem na commas, mgbe ahụ ọ dịghị nhọrọ dị na Excel. N'agbanyeghị nke ahụ, e nwere ụzọ si n'ọnọdụ a, ọ na-ejikwa ngwá ọrụ a na-akpọ "Bido Mpaghara".
Ịkwaga n'ọnọdụ Excel bụ otu n'ime ụzọ anyị si ekwu okwu n'elu. Na-esote, jide bọtịnụ òké aka ekpe ma họrọ saịtị nke ibe ndị anyị ga-ebipụta. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ oke dị iche iche, wee pịa ozugbo na mkpụrụedemede ya (cell), wee gaa na cell ikpeazụ nke nsoro ma pịa ya na bọtịnụ akaekpe ekpe mgbe ị na-ejide bọtịnụ ahụ Mgbanwe. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ peeji ndị dị n'usoro. Ọ bụrụ na anyị chọkwara ibipụta ọtụtụ ọnụọgụ ma ọ bụ akwụkwọ ntanetị, anyị na-ahọrọ ọfụma chọrọ ya na bọtịnụ ahụ ejiri. Ctrl. Ya mere, a ga-eme ka ihe niile dị mkpa dị mkpa.
Mgbe nke ahụ gafere na taabụ ahụ "Ntọala Page". Na ngọngọ nke ngwaọrụ "Ntọala Ntọala" na teepu pịa bọtịnụ ahụ "Bido Mpaghara". Mgbe obere menu gosipụtara. Họrọ ihe dị na ya "Nịm".
Mgbe ihe a gaghachiri taabụ "Njikwa".
Ọzọ, gaa na mpaghara "Bipute".
Na ntọala na mpaghara kwesịrị ekwesị, họrọ ihe ahụ "Print nhọrọ".
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na-eme ntọala ndị ọzọ a kọwara n'ụzọ zuru ezu na Usoro 1. Mgbe nke ahụ gasịchara, na mpaghara ebe a, anyị na-elele akwụkwọ nke a. A ghaghị inwe nanị iberibe ndị ahụ anyị kwuru na nzọụkwụ mbụ nke usoro a.
Mgbe ntọala niile banyere na ị kwenyesiri ike na ha gosipụtara ngosipụta nke ngosi ha na window ahụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Bipute".
Mgbe nke a gasịrị, a ga-ebipụta akwụkwọ mpịakọta ahịrị na mpempe akwụkwọ jikọọ na kọmputa.
Site n'ụzọ, n'otu ụzọ ahụ, site na ịtọ mpaghara nhọrọ ahụ, ị ​​nwere ike bipụta ọ bụghị naanị nchịkọta nke ọ bụla, kamakwa nkwụsị nke sel ma ọ bụ tebụl n'ime akwụkwọ. Ụkpụrụ nke ịdị iche iche ka dị ka ọnọdụ a kọwara n'elu.
Ihe omumu: Otu esi edozi ebe Excel 2010
Dị ka ị nwere ike ịhụ, iji hazie mbipụta nke ihe ndị dị mkpa na Excel n'ụdị ịchọrọ ya, ịkwesịrị ịkụnye ntakịrị. Nsogbu ndị dara ogbenye, ọ bụrụ na ịchọrọ idepụta akwụkwọ ahụ dum, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpịpụta ihe ya (mpaghara, akwụkwọ, wdg), nsogbu ga-amalite. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maara iwu maka ibipụta akwụkwọ na nhazi usoro a, ị nwere ike ịme nsogbu ahụ nke ọma. Ọfọn, isiokwu a na-agwa anyị otu esi edozie ya, karịsịa, site na ịtọpụta ebe obibi.